Iphepha leMingxuan lePhepha eliNikezela ngeeNapkins, iFektri eNgcono yePhepha
Ikhaya > Iphepha leNapkin & Iphepha Ithawula
Umzi mveliso weemveliso zamaphepha we-2020, sinikezela abathengi beemveliso zephepha ngokubanzi kunye nenkonzo yesiko kwixabiso lokhuphiswano lwefektri, apha ngezantsi imalunga nomboniso wethu wokugubungela i-napkin yesidlo sangokuhlwa, i-napkin yesidlo sasemini, i-napkin yesiselo, i-napkin, i-napkin, itawuli yephepha, njl.
Nxibelelana nathi, uyakufumanisa ukuba iMingxuan iya kuba lolukhetho olukhulu lokunyusa
& zixhamle ngokuxakeka kwakho.
Umgangatho ophezulu weFektri yokuThengiswa kwePhepha eliThintelweyo lePhepha eliThambileyo lokutya
Umgangatho ophezulu weFektri yokuThengiswa kwePhepha eliThintelweyo lePhepha eliThambileyo lokutya ngokukhawuleza uhlala kwindawo yentengiso kunye nomgangatho ophezulu kunye nenkonzo elungileyo.
Abavelisi abaDibeneyo beFektri yeDinner yeNkinkin yeDayimane
Abavelisi abaDibeneyo beFektri yeDinner yeNkinkin yeDayimani.Le mveliso inophawu lukhuphiswano lokwenyani kwintengiso yehlabathi.
Umgangatho ophezulu wePrimiyamu yesidlo sakusasa seNqanawa
I-HighQuality Premium ye-Embossed Dinner yesidlo sangokuhlwa Le mveliso inenxalenye elungileyo. Iiprototypes ezininzi zenzelwe ukuthatha isigqibo sokuyilwa okufanelekileyo kunye nokulungeleleneyo ngokufanelekileyo kuluhlu olubanzi lokulingana komzimba.
Isidlo sangokuhlwa Napkin-1/8 Songa isidlo sangokuhlwa seNapkin Bulk Ukuhanjiswa okukhawulezayo
Isidlo sangokuhlwa-1/8 Songa
Umgangatho oqinisekisiweyo weLunch Napkin Supply kwiXabiso eliPhambili leFektri
Isiselo seNapkin yokuThengiswa kweeVenkile kwiFektri yeNkinkin
I-Mingxuan 2020 eQhelekileyo yesiqhelo yokuSonga i-Napkin yokutya
I-Napkin ephantsi yokutya okukhawulezayo kweNapkin
I-1/5 Songa iitafile zamaphepha amaninzi
2ply Phinda usebenzise iPulp ephindaphindwe ngeNapkin ngokukhawuleza
2ply Hlaziya kwakhona i-Napkin
I-napkin ye-Wholesale ye-Wholesale yokutya isidlo sangokuhlwa-uMvelisi weDayimane yesidlo sangokuhlwa
Isidlo sangokuhlwa I-Napkin-Ipateni yedayimane
I-Napkin yokutya isidlo sangokuhlwa-1/4
Isidlo sangokuhlwa-1 / 4Songwayo